Phakamisa ithambeka lokulungisa iimoto
I-ramp yokulungisa imoto inokuphakanyiswa, uyilo olutsha, olusebenzisekayo, olusetyenziselwa ulondolozo lweemoto, ukusebenzisa esi sixhobo kunokuphakamisa ukuphakama kwemoto, abasebenzi bokulungisa abanokulungisa imoto.
Imveliso iyi-115cm ubude kwaye inokuphakama kwaye iwele kuluhlu lwe-25-38cm. Yenziwe ngentsimbi kwaye ubunzima bayo bunye buyi-19-25kg.
Yenza i-ramp ye-oyile yokutshintsha inkonzo ye-oyile isebenze ngokulula nangokukhululekileyo emazantsi emoto
Ukhetho lokuqala lwesithuthi sangaphandle sokuzonwabisa, esiluncedo, esisebenzayo nesifanelekileyo. Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo Le mveliso inokusetyenziswa kumathuba amaninzi okuphumla angaphandle, njengokuya epakini kwipikniki, ukuya kukhenketho lwangaphandle kunokusetyenziselwa ukuhambisa ukutya, amanzi, izinto kunye nokunye. Yiya ekupeyinteni kwentsimi, ukuzonwabisa, njl njl.nokusetyenziselwa ukupakisha izinto ezifunekayo, kulula ukuzisebenzisa.
Yenza i-ramp yeoyile yokutshintsha inkonzo ye-oyile isebenze ngokulula nangokucocekileyo emazantsi emoto .Yenziwe ipholiyesta eyomeleleyo, elula yokhathalelo, Isakhelo esomeleleyo sesinyithi- Inkqubo yokuncamathelisa ivili ngokukhawuleza, Ukudibanisa ukudibanisa kunye nokufakwa kweMesh Ukuqinisekisa ukuHanjiswa komoya olungileyo, Ngaphambili kunye umnyango ongasemva, umoya ojikelezayo kunye nomkhuseli wemvula kumnyango wangaphambili, i-Upper Mesh Net enesiciko esivaliweyo ngemicu ebonakalayo kunye nokubonisa
Iivili ze-PU lukhetho oludumileyo kwizicelo zeshishini ngenxa yokuthula kwazo xa kuthelekiswa namavili anzima afana nentsimbi okanye isinyithi. Iivili ze-PU njengesixhobo sokumothusa kwaye zinceda ukuqhuba ukukhwela. Ikwafunxa amaqhuma avela kumhlaba ongalinganiyo. Sebenzisa ivili le-PU endaweni yentsimbi kunokunciphisa kakhulu amanqanaba engxolo ukunceda ukukhusela ukuva kwabasebenzi bakho.
Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, Ivili likaCaster, DB Ivili, Umxube weKhonkrithi yase China, Isondo le-China PU, I-China i-PU Foam Isondo,